आज आफ्नै घरमा - कुनै समस्या छैन। को आगमन संग बंधक ऋण वर्ग मीटर को खरीद एक वास्तविकता बन्न छ। तपाईं अझै पनि कसरी बचत बैंक मा एक बंधक प्राप्त गर्न सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने, जवाफ सरल छ। यो कार्यक्रम चयन र कागजातहरू सङ्कलन गर्न मात्र आवश्यक छ। र अब सबै यो अझ विस्तृत।
तपाईं रूस Sberbank रोजेको विकल्प सबै, यो यहाँ छ बंधक लिन चाहनुहुन्छ भने, यो एक धेरै राम्रो विकल्प हो। बचत बैंक लचिलो संग कार्यक्रम को एक किसिम जस्तै क्रेडिट प्रदान गर्दछ ब्याज दर र प्रशस्त निःशुल्क अवस्था। राम्रो र कि बचत बैंक मा एक बंधक लिए, तपाईं ऋण र जम्मा बाँकी लागि ठूलो लाभ प्राप्त हुनेछ। बंधक को एक निश्चित भाग भुक्तानी गर्न, तपाईं यो रकम अर्को ऋण को रूप मा, एक बंधक यसलाई संलग्न प्राप्त र उदाहरणका लागि, एक घरेलु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, विकल्प बनेको छ। हामी बचत बैंक मा एक बंधक कसरी प्राप्त गर्न पत्ता लगाउन थाल्छन्।
आधारभूत र विशेष कार्यक्रम
अक्सर, कार्यक्रम चयन गर्न तपाईं केवल व्यक्ति मा बैंक को कुनै पनि कार्यालयमा देखा पर्न आवश्यक र भन्छन्: "। बचत बैंक मा एक बंधक लिन म चाहन्छु" कर्मचारी तुरुन्तै तपाईंले केही अवस्थित विकल्पहरू प्रस्ताव। आधार उधारो कार्यक्रम तपाईं एक तयार बनाएको आवास रूपमा, वा निर्माणाधीन खरिद गर्न अनुमति दिन्छ। ब्याज यहाँ दर आफ्नो आय र ऋण रकम, र तल भुक्तानीको मात्रा मा निर्भर। तपाईं पनि एक घर बनाउने ऋण लिन सक्नुहुन्छ। यी सबै अवस्थामा, यो गर्न प्रमुख सबैभन्दा आवासीय अचल सम्पत्ति हुनेछ। तर, यस्तो सैन्य बंधक वा बंधक प्लस प्रसूति राजधानी रूपमा विशेष कार्यक्रम छन्। जहाँ ब्याज दर धेरै कम छन्, तर यी कार्यक्रम को प्रस्तावित अवस्थामा फिट सबै।
यदि तपाईं धेरै bothering छैन, बचत बैंक मा एक बंधक प्राप्त गर्न कसरी प्रश्न, तपाईं अक्सर बैंक मा आयोजित जो एक विशेष प्रमोशन लागि प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, त्यहाँ नयाँ आवास को स्टक छन्। कुनै 12 भन्दा बढी प्रतिशत, ऋण कुनै 12 भन्दा बढी वर्षको लागि प्रदान गरिएको छ, न्यूनतम प्रारम्भिक योगदान मात्र 12 प्रतिशत मात्रा हुनेछ। यो बस भण्डारण र एकदम लाभदायक प्रस्ताव गरिएको छ। यो पनि अक्सर जवान परिवारको लागि साझा आयोजित छ। सामान्यतया spouses को उमेर मा सीमा छ, र दर धेरै कम छ - 10.5%। तर अधिकतम ऋण अवधि 30 वर्ष छ। प्रारम्भिक योगदान निकै सानो - यो 10% छ।
यहाँ बचत बैंक मा एक बंधक प्राप्त गर्न कसरी सामान्य सुझाव छन्। सुरू गर्न, आफूलाई चयन गर्नुहोस्, तपाईं पनि मासिक भुक्तानी बैंकको वेबसाइटमा छ कि कैलकुलेटर मा गणना गर्न सक्छन्। त्यसपछि प्रबन्धक संग सल्लाह लिनुहोस्। यो व्यक्ति भन्दा मा फोनमा गरेको हुनुपर्छ। अर्को, तपाईं खातामा सबै कारक लिएर, उत्कृष्ट विकल्प चयन गर्न को लागि एक कर्मचारी सदस्य सोध्नुहोस्। तपाईंले केही सुझावहरू हुनेछ अघि जो तपाईंले चयन गर्न सक्नुहुन्छ कि मानौं। ऋण अवधि धेरै उच्च हुनेछ भने पनि, एक सम्भाव्य मासिक भुक्तानी मा रोक्नुहोस्। कागजातहरूको लागि जाँदा, सबै कुरा सरल छ। तपाईं बैंक कार्ड को एक वेतन प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं मात्र लागू गर्न पर्याप्त पासपोर्ट हुनेछ। अन्यथा यो लेखा विभाग देखि आफ्नो आय प्रमाणपत्र पुष्टि गर्न आवश्यक छ।
म बचत बैंक मा एक तल भुक्तानी बिना धितो प्राप्त गर्न सक्छन्?
बंधक भ्लाडिभास्तोक। त्यहाँ उत्तेजना एक बंधक लिन चाहे छ?
बंधक देंगे: बैंक। को "बचत बैंक" मा एक बंधक देंगे: समीक्षा
कसरी बंधक बाहिर लिने?
बंधक कस्ता प्रकारका अवस्थित र के लिन राम्रो छ
कालो विवाह कपडे मा दुलही समाज चुनौतीपूर्ण छन्
घरमा मध्यम कपालको लागि फैशनेबल कपाल पसलहरू
Chaise Jetem - सान्त्वना र आफ्नो बच्चाहरु को सुरक्षा!
Unruliness - नैतिकता को अनुहार मा थुक्नु।
नागरिक सेवकहरू - एक निश्चित कानुनी संस्थाहरू
कुकुर को सबै भन्दा लोकप्रिय र सबै भन्दा राम्रो-ज्ञात नस्ल
धर्मनिरपेक्ष राज्य: मिथक वा वास्तविकता?